Guddoomiyihii degaanka oo qarax lagu dilay & faah faahin laga helayo - Awdinle Online
Guddoomiyihii degaanka oo qarax lagu dilay & faah faahin laga helayo
Wararka laga helayo Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in xalay xilli dambe qarax lagu dilay Guddoomiyihii degaanka leego ee Gobolkaas, xilli uu ku sugnaa degmada Walanweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Alle ha u Naxariistee Guddoomiyihii degaanka leego oo lagu Magacaabi jiray Xasan Gucdur uu u geeriyooday qarax loogu xiray Gurigiisa, waxaana ku dhaawacmay qaraxaas laba askari oo kamid ahaa ilaaladiisa.
Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xqiijiyay geerida Guddoomiyihii degaanka leego oo bilihii la soo dhaafay ku sugnaa degmada Walanweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa ka tacsiyadeeyay dilka Guddoomiyihii degaanka leego, waxaana weli dilkaasi si cad uga hadlin mas’uuliyiinta Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose.
Previous articleXiisado dagaal oo laga dareemay xaafadaha Waqooyiga Muqdisho & Taliye Odawaa….
Next articleDowladda Soomaaliya oo shaacisay in lacagihii ay ka jarteen Beesha Caalamka